Articles Archives - Page6of 85 - Popular
သိပ္ပံမောင်ဝ မြန်မာစာဂုဏ်ထူး တန်း တက်စဉ်က 'မြန်မာစာယူတာ ဘုန်းကြီးဝတ်မှာမို့လား'ဟု မိတ်ဆွေ များက သရော်ခဲ့ကြသည့်အကြောင်း ဖတ်ရဖူးသည်။ မြန်မာစာကို နေရာ မှန်ပြန်ရောက်အောင် ကိုလိုနီခေတ် တွင် ဆရာကြီးများ အောင်မြင်စွာ ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း ယနေ့ ခေတ်တွင်.…
မင်းက ဗမာလည်း ဆိုသေး၊ ဝတ်ပုံစားပုံက ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ ဗမာ မှ မဆန်ဘဲ၊ ကလေကချေလို ဝတ် ထားတဲ့ အကောင်။ ကြည့်စမ်း လုံ ချည်ခါးပုံစက မြေကြီးတိုက်နေပြီ. . .
လေဟာနွေးလို့၊ ကလေး တွေ တခစ်ခစ်ရယ်လို့၊ ခွေးကလေး တဝုတ်ဝုတ်ဟောင်လို့။ တံခါးဖွင့်သံ ဟာ ကျွီ ...ကနဲမြည်လို့။ ငါက တော့ အကြာကြီးကို အိပ်စက်လို့. . .
နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပုံမှန် တွေဟာ အရေးပါလာတယ်။ ပုံမှန် မဖြစ်တဲ့နေ့တွေမှာ နေရတာ တလှပ် လှပ် ဟာတာတာ ညနေခင်းတွေဖြစ် လာ ...။ နေဝင်ရီတရောမှာ မျော သွားတဲ့တိမ်လို အထိမ်းအချုပ်မရှိ လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်လာပြီး ပုံမှန်ဖြစ် လာတဲ့အခါ…
အစည်း အရုံးဥက္ကဋ္ဌ မင်းသားကြီး ဦးဇင်ဝိုင်း က နိုင်ငံခြားကားကို မှီးယူပြီး မြန်မာ မှုပြုတဲ့ကားတွေကို ဇာတ်ကားအ ကယ်ဒမီမပေးဘူး၊ သရုပ်ဆောင်တွေ ကိုတော့ သရုပ်ဆောင်အနုပညာစံမှီ ရင်ပေးမယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ဖူးတယ်။...
ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်နုစဉ်က မြန်မာ နိုင်ငံရှိ အနုပညာသမားအကြားတွင် 'အနုပညာသည် အနုပညာအတွက်' ဟူသော အုပ်စုနှင့် 'အနုပညာသည် လူထုအတွက်'ဟူသော အုပ်စုတို့ ပြင်းထန်စွာသဘောကွဲလွဲပြီး ငြင်းကြ ခုန်ကြ။ အော်ကြဟစ်ကြ...
အမှတ်တရဖြစ်ရပ်မှာပါမောက္ခ ဌာနမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကျွန်တော် ၂ ကြိမ်အတိုင်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုင်သူများမှာ တပည့် များပင်ဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ်မှာ...
ခြောက် သွေ့ဆွေးမြည့်နေသော သစ်ရွက် ကြွေတစ်ခုကို မြေတွင်းအောင်းပိုး ကောင်ငယ်ကလေးတစ်ကောင်က ကိုက်ဖြတ်စားနေပုံဖြစ်သည်။ ဘာမျှ အရေးမကြီး။ ထူးဆန်းမနေ။ သာ မန်မျှ ယင်းကို ကဗျာဆရာက...
ငှက်ကလေးနှစ်ကောင်က အချိန်မှန်ထတယ်။ အချိန်မှန်လာ တယ်။ အိပ်ယာကို ကျွန်တော်ထက် စောပြီး အိပ်ယာဝင်တယ်။ အသံမ ပေးဘူး။ မနက် ၅ နာရီဆို ငှက်က လေးတွေ ပုံမှန်နိုးတယ်။ အဲဒီအချိန် မျိုးဆို ကျွန်တော် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်…
တစ်ချက်တစ်ချက် ချဉ်စုတ်စုတ် တိုးဝင်လာတဲ့ အနံ့ဆိုးတစ်ခုကြောင့် ပန်ကာကို နံပါတ်(၃)ထိ တိုးနှိပ် လိုက်ရတယ်။ မြောက်လေတိုက်နေတာဆိုတော့ . . .